Gurmeet Choudhary Oo Xaaskiisa Debina Bonnerjee Guri Ay Ku Riyoon Jirtay Hadiyad Ahaan U Siiyay Ka Hor Dhalasheeda - Hablaha Media Network
Gurmeet Choudhary Oo Xaaskiisa Debina Bonnerjee Guri Ay Ku Riyoon Jirtay Hadiyad Ahaan U Siiyay Ka Hor Dhalasheeda
HMN:- Atooraha caanka ah Gurmeet Choudhary oo ay Soomaalida u taqaan Maan Siin Kuraana magaca musal salka Geet loogu yeerayo ayaa hadal heyn cusub abuuray.
Gurmeet Choudhary wuxuu hadiyad ahaan xaaskiisa Debina Bonnerjee u siiyay guri ay ku riyoon jirtay ka hor xaflada dhalashadeeda intaan la gaarin.
Gurmeet ayaa xaaskiisa guri kaga iibiyay Waqooyiga Hindiya gaar ahaan Himachal Pradesh xili ay sanadkii hore dalxiis halkaas u joogeen ayay Debina u sheegtay seygeeda Gurmeet inay waligeed ku riyoon jirtay in Himachal Pradesh dhul ku yeelato.
Balse mudo 12-bilood kadib ayuuGurmeet Choudhary xaaskiisa Debina Bonnerjee riyadeeda u rumeeyay weliba si lama filaan ah ayuu ugu keenay furaha guri weyn ee uu Waqooyiga Hindiya uga iibiyay.
Dhinaca shaqada Gurmeet waxaa Jimcada nagu soo fool leh tiyaatarada loo saari doonaa filimka Laali Ki Shaadi Me Laddoo Deewana oo uu la jilaayo Akshara Haasan iyo Vivan Shaah waana filim jaceyl iyo shactiro isku jiro ah.
Waxaa xusid mudan in Gurmeet iyo Debina oo isla sameeyeen musal salo kala duwan sida taxanaha caanka ah Ramayan ayaa si qarsoodi ah isku guursadeen sanadii 2006 ayagoo 19-sano iyo 20-sano kala jiraan balse sanadii 2011 ayay guur cusub dhigteen shaaca ka qaadeen inay qoys yihiin.